macluumaad Bank | USAHello | USAHello
Marka ugu horaysa ee aad timaado ee dalka Mareykanka, dhici karta inaadan garanayn waxa la sameeyo oo aad lacag ama cidda aad ku kalsoon tahay. Dadka cusub qaarkood waxay ka cabsadaan in ay isticmaalaan bangiyada. Waxaa laga yaabaa inaad dareentid welwel ku saabsan lacagtaada siinta qariib ah bangiga. ayaa laga yaabaa in aad marnaba isticmaali bangi ka hor iyo ka yaabi ku saabsan sida loo furan lahaa xisaab bangi. Boggan waxaa ku qoran macluumaad ku bangiga in aad fahamto nidaamka Maraykanka.
kaarka debit A waa kaar caag ah oo aad isticmaasho si aad u hesho lacag kaash ah ka soo ATM (Mashiinka lagala baxo iswada), taas oo ah mashiinka a in uu haystaa lacag. ATM sida caadiga ah ka baxsan bangigaaga. Waxaa jira ATM kale oo badan dukaamada iyo goobaha kale ee dadweynaha, laakiin ATM uusan ka tirsan tahay aad bangiga, waxaad ku bixin kartaa lacag caddaan ah si aad u hesho.
Waxaad kaloo isticmaali kartaa kaadhka debit si aad u bixiso wax dukaamada, online, iyo telefoonka. Ka taxaddar isticmaalaya kaarka bangiga online. bartaan sida loo noqon ammaan adeeganayso internetka.
aad Haddii dooran shubato xisaabta keydka ah ama xisaab hubinta, weydiiso in aad xaq u account lacag la'aan ah. shaqaalaha Bank waa ka jawaabaan su'aalahaaga iyo caawiyaan in aad fahanto sida bangiyada iyo lacagta shaqo. Waxaa ka wanaagsan in ay awoodaan in ay lacag (lacag bangiga) iyo lacag ula soo baxdo (lacag bixin bangiga) iyadoon lagu dalicin lacag. bankiyada badankoodu waxay leeyihiin nooc ka mid ah account jeegga lacag la'aan ah, sidaa darteed ma aha in aad u baahan tahay in aad bixiso fii. Waxaad ka heli kartaa heerka fiican credit union a, taas oo ah nooc ka mid ah bangiga iska leh xubnaheeda,.